Zeevou dia miombona amin'ny VRScheduler ho an'ny asa fanamoriana mora vakansy
VRScheduler & Zeevou fampidirana
VRScheduler dia fomba tony hitantanana mpiasa manofa vakansy ary asa. Amin'ny fampidirana an'i Zeevou amin'ny VRScheduler, dia tsy ho diso anjara asa madio, fizahana na asa hafa ianao. Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny anao rehetra fikarakarana olana ary mitahiry ora maro amin'ny fandaharam-potoana sy karama. Ampitomboy ny vola miditra ary mamorona vahiny sy tompona sambatra kokoa, ary mazava ho azy fa tsikera tsara kokoa, miaraka amin'ny fanampian'ny Zeevou sy ny VRScheduler.
Mitsitsia fotoana lany amin'ny fandaharam-potoana hatramin'ny 80%
Ampitomboy ny mpiasa vokatra sy fahafaham-po
Vitsy kokoa ny effetencies fanadio sy fikojakojana
Ampitomboy ny fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fanarahana ny vola fikojakojana azo alaina
misoratra anarana amin'ny VRScheduler